Maxkamad ku taal dalka Kenya oo Diidey in la xiro Xeryo Qaxooti Soomaaliyeed ku noolyihiin. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Wararka Maxkamad ku taal dalka Kenya oo Diidey in la xiro Xeryo Qaxooti...
Maxkamad ku taal dalka Kenya oo Diidey in la xiro Xeryo Qaxooti Soomaaliyeed ku noolyihiin.
Maxkamadda sare ee Kenya ayaa khamiistii hakisay tallaabada dowladda Kenya ay ku xireyso laba xero qaxooti oo ay ku jiraan boqolaal kun oo qaxooti Soomaali ah..
Maxkamadda ayaa soo saartay amarka KMG oo socon doona 30 maalmood, kaddib markii Peter Gichira oo horay u ahaa murashax madaxweyne uu gudbiyay dacwad sharciyeed oo uu ku doonayo in lagu joojiyo xiritaanka labada xero.
Wasaaradda arrimaha gudaha ee Kenya ayaa siisay hay’adda Q.M u qaabilsan qaxootiga 14 maalmood, oo ku eg Arbacada, in ay la timaado qorshe lagu xirayo xeryaha, iyadoo leh “ma jirto meel lagu sii wado wadaxaajoodka dambe.”
Xerada Dhadhaab ee bariga Kenya ayaa waxaa ku jira in ka badan 200,000 oo qaxooti ah oo inta badan ka yimid Soomaaliya, Xerada Kakuma ee waqooyiga Kenya ayaa iyana waxaa ku jira ku dhawaad 200,000 oo qaxooti magangalyo doon ah,
Maxkamadda ayaa ku doodday a in amarka lagu xiray labada xero uu xadgudub ku yahay dastuurka Kenya iyo waliba sharciyada caalamiga iyo heshiisyada la xiriira ilaalinta xuquuqda qaxootiga.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhankeeda horay ugu eedeysay Kenya in ay isku qaldeyso khilaafka siyaasiga ah ee kala dhaxeeya Soomaaliya iyo arrimaha Bani’aadannimada, waxaana ay uga digtay in ay qaado tallaabo aan sharci aheyn oo ka dhan ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalkeeda.
Previous articleDawladda Federalka iyo Maamul goboleedyada Xubnaha ka ah DFS oo Cadaadis lagu saarayo in ay wada hadalada sii wadaan.
Next articlePuntland oo Soo Rogtey Xayiraado Lagu Xakameynayo Xanuunka Safmarka Covid-19.